ढोका नै नलगाई जब काठमाडौवाट पोखरा उड्यो जहाज… ! – List Khabar
Home / समाचार / ढोका नै नलगाई जब काठमाडौवाट पोखरा उड्यो जहाज… !
ढोका नै नलगाई जब काठमाडौवाट पोखरा उड्यो जहाज… !
admin January 16, 2022 समाचार Leaveacomment 286 Views
काठमाडौ । आइतवार काठमाडौ विमानस्थलमा एउटा घटना भएको छ । विमानका कर्मचारीको लापरवाहीको हद पार भएको देखिएको छ । काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको गुण एयरलाइन्सको जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं फर्काइएको छ । गुण एयरलाइन्सको एक बीचक्राफ्ट जहाज सात मिनेटमै पुनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै फर्किएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक भोला गुरागाइँले बिहान पोखराका लागि उडेको जहाजको तत्कालै ढोका नलागेको इन्डिकेसन भएपछि काठमाडौं विमानस्थलमा फर्काएर अहिले चेकजाँच भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जहाज उडेको ७ मिनेटमै पुनः विमानस्थल नै फर्किएको छ । उक्त जहाजको प्राविधिक परीक्षणपछि पुनः उडानयोग्य भएको पनि विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘जहाजको यात्रु चढ्ने ढोका राम्रोसँग ल क नभएकाले इन्डिकेटरले संकेत गरेको रहेछ,’ गुण एयरलाइन्सका प्रवक्ता प्रज्ज्वल थापाले भने, ‘अवतरणपछि परीक्षण भइसक्यो र जहाज फेरि अर्को गन्तव्यमा उडान गर्न तयारी अवस्थामा बसिसकेको छ ।’ उनका अनुसार अनुसार पोखरा उडान अर्को जहाजबाट गराइएकाले अब उक्त जहाज ३ बजे भरतपुर उड्ने छ ।
Previous काठमाण्डौमा बस्नुहुन्छ भने नयाँ सूचना थाहा पाउनुहोस्,नत्र कारवाहीमा परिएला।सरकारले जारी गर्यो नयाँ नियम
Next मन्त्री र पूर्वमन्त्रीबीच पोल खोला-खोल, खुले यस्ता रहस्य